Rosia: Lasa i Putin, Tonga i Medvedev · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2018 3:18 GMT
Mpisera LJ kozenko – Andrey Kozenko, mpanao gazety ao amin'ny Kommersant, gazety Rosiana mpivoaka isan'andro- nanoratra momba ny lova navelan'ny filoha teo aloha, Vladimir Putin:
[…] Tsapako fa tsy misy dikany ny fialan'i Putin. Tsy misy hankasitrahana azy. Nanapaka araka izay azony natao izy, araka ny toe-tsaina. Maro ny olona tia izany.
Saingy mbola misy zavatra iray amin'ity fehezanteny ity: “Ny filoha teo aloha Vladimir Putin” … mmmmm 🙂 […]
Tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, nanazava ny fanapahan-keviny handray anjara amin'ny Diaben'ny Mpanohitra ao Moskoa amin'ny 6 May i Kozenko (ny heviny mikasika ny fihetsiketsehana dia nasongadina tamin'ny dikan-teny tao amin'ny Global Voices omaly):
[…] Tsy tiako ny [endrika-Sovietika] “fiderana manidina sy lava be” [ho an'ireo mpitarika Rosiana] amin'ny fahitalavitra. Tsy tiako ny endrika vaovaon'ny fampielezan-kevitra.
Tsy tiako ny fitiavan-tanindrazana mahery setra sy ny lahateny feno fankahalana.
Mahatsiaro ho maloto aho rehefa mandre governora iray izay tsemboka mipetraka miaraka amin'ny valizim-bola ao amin'ny efitra fandraisana lehiben'ny orinasa fehezin'ny fanjakana – mba hahafahan'ny faritra tantaniny ho tafiditra ao anatin'ny programa [fampandrosoana vatsian'ny fanjakana ara-bola].
Tsy hitako mampihomehy intsony izany satria ao amin'ny faritra nahaterahako, nalefa tany am-ponja noho ny kolikoly ny atsasa-manilan'ireo manampahefana. Indrindra indrindra, raha mieritreritra fa misy ny fiheverana hoe nogadraina izy ireo fa satria tsy hoe mendrika izany, fa noho ny ady an-trano. Satria, amin'ny ankapobeny, mendrika ny hogadraina izy rehetra.
Tena tsy tiako ny mahita fa ny namako sy ny olom-pantatro rehetra dia tafiditra amin'ny raharaham-barotra [mety hogadraina mora foana]. Ary milaza izy ireo fa miezaka [mafy araka izay vitany] manao ny asany araka ny lalàna.
Na izany na tsy izany, manana ny antony hankahalako ity fitondrana ity aho. Ary te hifidy ny mpanohitra. Ary tsy azoko mihitsy hoe nahoana ny fitondrana no namotika ireo mpanao politika mpanohitra izay mety hisolo tena ny tombontsoako. Tsy milaza mihitsy aho hoe tokony handrafitra ny ankamaroan'ny antenimiera izy ireo. Tiako fotsiny izy ireo mba ho eo sy hanana fiantraikany. Saingy tsy izany […]. Ary tsy omena na dia safidy aza aho, fa zavatra omena: adinoy izany, ajanony ny fikarakarana. Miaina firoboroboan'ny fanjifàna isika, ankafizo izany. Mividiana zavatra ho anao. Na, mandehana any amin'ny Diaben'ny Mpanohitra raha mpanohitra ianao.
Saingy tsy te handeha amin'ity diabe ity mihitsy aho, miaraka amin'ireo olona tsy heveriko fa akaiky ahy . Iray amin'izy ireo […] ilay mpanoratra [Eduard Limonov], ny iray hafa dia mpilalao “echec” [Garry Kasparov]. Tsy tiako ity endrika fanoherana ity, tsy tiako ny mihira teny filamatra ary tsy fantatro hoe nahoana. Saingy, averiko indray fa tsy manan-tsafidy aho. Na handeha aho, na hijanona tsy hiraharaha izay zava-mitranga.
Ity ny fanehoan-kevitra farany amin'ity lahatsoratra ity:
stas_ya: Ahoana ny momba ny zavatra rehetra [araka izay ilazanao azy], nefa tsy misy vola ihany koa? Ary [tsy manantena hahazo izany amin'ny hoavy.] Inona no firoboroboan'ny fanjifàna resahintsika? Ny hany zavatra sisa tavela dia ny tsy firaharahiana fahatezerana – tsy hanao ny diabe [fihetsiketsehana], na any amin'ny fivarotana …
Iverenana ny any amin'ny fitokanana an'i Medvedev: mpisera LJ dolboeb (Anton Nossik) gaga tamin'ny fitohanana tany Moskoa tamin'ny Alarobia ka nanapa-kevitra ny hanoratra taratasy ho an'ny filoha vaovao Rosiana:
[…] Dmitry Anatolyevich hajaina,
Arahabaina amin'ny fisahanana ny toeranao vaovao. Manantena aho fa nankafizinao tahaka ny nankafizako azy ny lanonana. Misaotra anao aho noho ny fanomezana fahafahana tsy fahita firy hahita an'i Moskoa tsy misy fitohanan'ny fifamoivoizana androany. Miangavy anao mba hanao fitokanana indray mandeha isan-kerinandro, indrindra amin'ny Alarobia. Heveriko fa mety hanampy amin'ny famahana ny olan'ny fitohanan'ny fiara marobe ao an-drenivohitra Rosiana izany. […]
Raha jerena amin'ity sariitatra malaza “algorithma sahy/be volo” ity – izay nalefan'ilay mpisera LJ tumbochka , ankoatra ny hafa – tokony hanana fitokanana mihoatra ny iray ao anatin'ny folo taona manaraka (raha tsy herinandro vitsivitsy) i Medvedev:
Mpitondra Sovietika/Rosiana: Lenin (sahisahy), Stalin (voloina), Khrushchev (sahisahy), Brezhnev (voloina), Andropov (sahisahy), Chernenko (voloina), Gorbachev (sahisahy), Yeltsin (voloina), Putin (sahy) Medvedev (volo) … Putin (sahy), Medvedev (volo), Putin (sahy), Medvedev (volo), Putin (sahy), Medvedev (volo).